FITORAHANA FIARAKODIA TENY AMBOROVY : Valo mianadahy nampidirina am-ponja vonjy maika
Naiditra am-ponja vonjy maika ny tanora valo mianadahy rehefa natolotra ny Fitsarana ny talata teo. 4 octobre 2019
Ny fito moa niditra avy hatrany fa ny iray kosa mbola manaraka fitsaboana, ka rehefa tsy maninona intsony vao aterina any am-ponja. Araka ny nambaran’ny zandary eny Amborovy dia efa miisa efatra ireo fiarakodia no lasibatry ny tora-bato teny amin’ny fokontany Amborovy nandritra ity fotoam-pialan-tsasatra ity. Na efa nateti-pitranga aza ity herisetra ity, tsy mbola nisy olona tratra fa tamin’ity indray mitoraka ity kosa dia tsy nanaiky ny lasibatra.
Ny alahady teo dia valo mianadahy no nosamborin’ny tompon’ny fiarakodia notorahan’izy ireo. Fiarakodia tsy mataho-dalana avy any Tsaramandroso ho any Amborovy no nisy nitoraka ny fitaratra ny alahady hariva teo, amin’ny lalana akaiky ny Toyota Rasseta iny, ka vaky ny fitaratra. Niverina avy hatrany ny tompon’ny fiarakodia ka nisambotra ireo tanora hitan’izy ireo nitoraka ny fiarany. Nisy ny sakoroka nandritra ny fisamborana ka naratra ny iray tamin’izy ireo. Naterin’ny tompona fiarakodia tany amin’ny polisy ilay tovolahy sy tovovavy namany miisa telo, ary nametraka fitoriana izy ireo. Nandritra ny famotorana dia nanondro ny namany efatra hafa izy ireo ka niakatra ho valo mianadahy ny olona voarohirohy amin’ity raharaha ity. Ireo efatra hafa notondroiny kosa anefa manamafy fa ilay tovolahy maratra no nitoraka, izany hoe mifanilaka samy milaza ho tsy tompon’andraikitra izy ireo nefa samy manondro ny namany ho nanao ny toraka fiarakodia.
Nanatona fahitalavitra ny havan’ireo olona voarohirohy ireo nitondra fanazavana sy fitarainana. Araka ny nambaran’izy ireo dia niverina avy hatrany ilay fiarakodia ka nandona ilay tovolahy iray noheveriny fa nitoraka ilay fiara. Nodominy tamin’ny fiarakodia ilay zaza ka latsaka tany anaty tatatra. Nambarany hatrany moa fa naverin’ilay fiara nodomina sy nitsahana indray ilay tovolahy na efa tany anaty tatatra aza. Mangana ny lamosina, tapaka ny tanan’ilay tovolahy eo amin’ny 19 taona eo izay tokony hiatrika fanadinana bakalorea ny alatsinainy teo, hoy hatrany ny fianakaviany. Araka ny fanazavana hatrany dia nisy tovovavy telo nanampy ilay tovolahy, rehefa nahita azy latsaka tao anaty tatatra sy niantso vonjy ka nosamborin’ilay tompon’ny fiarakodia niaraka tamin’ilay tovolahy. Nisy ankizy hafa koa nanatona ny polisy nitantara ny zavatra hitany araka ny nambaran’ny fianakaviana hatrany ka mbola nosamborina koa, hoy hatrany izy ireo.
Notazonina tao amin’ny tranomaizin’ny polisy ny zanak’izy ireo, ary saika tsy navela nalefa notsaboina, hoy hatrany ny fanazavana. Milaza koa izy ireo fa hafahafa ny fandraisan’ny polisy azy ireo tamin’ny fotoana tokony hametrahan’izy ireo fitoriana. Manambara kosa ny tompon’andraikitra ao amin’ny polisy fa misokatra ho an’ny rehetra ny kaomisaria ka afaka mametraka fitoriana avokoa izay te hametraka. Ny havan’ny olona naiditra am-ponja vonjy maika kosa mbola tsy nisy nametraka fitoriana hatramin’ny ora nanoratanay.
“Misokatra ny zotra nasionaly, hiverina ny sidina mankany ivelany” FEPETRA ARA-PAHASALAMANA (388) 21 septembre 2020 Sarona ilay miaramila mpamatsy basy sy mpiray tendro amin’ny jiolahy ANTSIRANANA (118) 24 septembre 2020 Tsy nandrenesam-peo intsony ny Fitsarana Malagasy RAHARAHA RABEKOTO RAOUL (113) 24 septembre 2020 Maty voatifitra i Sopa mpamaky fasana sy efa nahafaty zandary ANTSALOVA (96) 22 septembre 2020 Potiky ny afo koa ny Sekoly “Notre Dame de Lourdes” MANJAKANDRIANA (89) 21 septembre 2020 Nodimandry teo amin’ny faha-82 taonany Ramahafadrahona ZAVAKANTO (76) 22 septembre 2020